Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndokwa ụgbọ elu na USA na-arị elu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ntinye akwụkwọ ụgbọ elu na USA na -arị elu.
Ntinye akwụkwọ ụgbọ elu na USA abawanyela mgbe ọkwa abụọ mere na ebe a ga-emeghe ndị njem si mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi na Nọvemba.
Ọnụ ọgụgụ mbụ bụ maka njem ozugbo ezumike mmachibido iwu n'ime izu na-amalite na Nọvemba 8.
Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke abụọ karịrị ekeresimesi, na-enweta 16% nke ntinye akwụkwọ n'ime izu ekeresimesi na 14% n'izu gara aga.
A na-atụ anya mmụba dị elu na ntinye akwụkwọ na USA maka oge ekeresimesi n'izu ndị na-abịa.
Nnyocha ọhụrụ na-ekpughe na ntinye akwụkwọ ụgbọ elu na USA abawanyela na-eso ọkwa abụọ na ebe a ga-emeghe ndị njem mba ofesi gbara ọgwụ mgbochi na Nọvemba. Ka ọ na-erule etiti ọnwa Ọktoba, ntinye akwụkwọ kwa izu gafere 70% nke ọkwa ọrịa butere ọrịa.
A mara ọkwa nke mbụ na 20th Septemba, mgbe White House kwuru na ndị ọbịa si United Kingdom, Ireland, mba 26 Schengen, China, India, South Africa, Iran na Brazil ga-ahapụ ịbanye USA, na-enweghị ike ịnọpụ iche, ma ọ bụrụhaala na agbanyere ha ọgwụ mgbochi. Nke ahụ butere mmeghachi omume ozugbo, na ntinye akwụkwọ kwa izu site na UK na-awụ elu 83%, site na Brazil na-awụli elu 71%, yana site na EU na -awụpụ 185%!
E mere ọkwa nke abụọ na 15th Ọktọba, mgbe onye ode akwụkwọ mgbasa ozi onye isi ala US, Kevin Munoz, kpọrọ aha 8th Nọvemba dị ka ihe mgbochi ụbọchị ga-adị jụụ. Ntinye akwụkwọ kwa izu na-arịgoro elu, na-awụlikwa elu 15% site na UK, 26% sitere na EU na 100% sitere na Brazil.
N'ileghachi anya na nkesa akwụkwọ ntinye akwụkwọ ekwenyesiri ike, maka mbata na Nọvemba na Disemba, site na ahịa isi mmalite atọ ahụ (Brazil, EU na UK), enwere ọnụ ọnụ ugwu abụọ doro anya. Ọnụ ọgụgụ mbụ bụ maka njem ozugbo ezumike nke mmachi gasịrị n'izu na-amalite 8th Nọvemba, na-enweta 15% nke ntinye akwụkwọ. Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke abụọ karịrị ekeresimesi, na-enweta 16% nke ntinye akwụkwọ n'ime izu ekeresimesi na 14% n'izu gara aga.
Ihe omuma a gosiputara ozokwa nnukwu ihe eji achọ njem. Ngwa ngwa ndị mmadụ nụrụ na a ga-ahapụ ha ịga leta USA ọzọ; ha gbara akwụkwọ; na oke nha akwadoro ka ha fega ozugbo ha nwere ike.
Ọ dịkwa mma ịmara na ntinye akwụkwọ arịgoro elu ozugbo enyere otu ụbọchị. Nke ahụ abụghị ihe ijuanya kpamkpam n'ihi ihe abụọ. Nke mbụ, ijide n'aka nke otu ụbọchị na-akpali obi ike.
Nke abụọ, ndị chọrọ ịga njem tupu ngwụcha Nọvemba enweghị ike ime nkwa ruo mgbe ha maara nke ọma na ha nwere ike ime njem mgbe ha chọrọ. A na-atụ anya mmụba dị elu na ntinye akwụkwọ na USA maka oge ekeresimesi n'izu ndị na-abịa.